ရွှေဇနက ကုမ္ပဏီမှ အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ | Golden Zaneka Public Co.,LTD
ရွှေဇနက ကုမ္ပဏီမှ အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပါမည်။ »
Stanford University နှင့် ရွှေဇနက အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖွင့်လှစ်မည့်
Advanced Emergency Medicine Training သင်တန်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူုခြင်း
သင်ကြားမည့်ဘာသာ – Emergency Medicine for Physicians
သင်ကြားပို့ချမည့်ဆရာများ – Faculty Members from the Department of Emergency Medicine, Stanford University
သင်တန်းကာလ – ၁၈ လ
သင်တန်းစမည့်ရက် – စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်
သင်တန်းပို့ချမည့်စနစ် – 1. Live formal lectures, 2. Case based presentations, 3. Hands on skill training, 4. Observation in Emergency Departments, 5. Assessment of candidates, 6. Case studies from the show ” ER”
First International Emergency Medicine Physician training program created by Stanford Emergency Medicine International Candidates who successfully complete the course will receiveaDiploma from Stanford Emergency Medicine International, Stanford University
OPEN HOUSE DATE & TIME – 30th JUNE, 2015, 1:00 PM to 3:00 PM @ 12th Floor, Auditorium
Parami General Hoapital, Yangon
ရွှေဇနက အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် – အမှတ် (၄၀/ ၅က)၊ မြစံပယ်ရိပ်မွန်လမ်းသွယ်၊ မြစံပယ်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
Email : shwezaneka@gmail.com, Ph : 951- 667173
ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး – အမှတ် (၆၀/ ဂျီ-၁)၊ ပါရမီလမ်းသစ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
ဖုန်း – ၉၅၁- ၆၆၁၆၉၄
ဒေါက်တာဇော်ဝင်းအောင် – ဖုန်း- ၀၉ ၅၀၁၁၈၆၇၊ ၀၉ ၉၇၂၂၁၀၇၄၄။
ဒေါက်တာမြတ်နိုး – ဖုန်း-၀၉ ၅၀၄၁၉၂၇၊ ၀၉ ၇၉၅၃၀၅၂၅၈။ Email : leo.myatnoe@gmail.com
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများတွင် Care Giver တစ်ဦးအနေနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါအရည်အချင်းရှိသူများ အလိုရှိပါသည်။
(၂) အသက် (၁၈)နှစ်မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းရှိသူ
(၃) အချိန်ပြည့် (ရုံးပိတ်ရက်မှအပ နေ့စဉ် နံနက် ၉ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ) (၁ဝ)လ သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်သူ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ Golden Zaneka Public Co., Ltd. နှင့် Japan SAT Consulting Co., Ltd. / Myanmar International Business Training and Internship General Services Co., Ltd. (MIBTI) – License No.57/2013 တို့မှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရေးအတွက် –
(၁) ဂျပန်စာ အရေး၊ အဖတ်၊ အပြော ကျွမ်းကျင်သည်အထိ သင်ကြားပေးခြင်း၊
(၂) ဂျပန်ရိုးရာဓလေ့နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ သင်ကြားပေးခြင်း၊
(၃) သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နည်းစနစ်များနှင့်အညီ လေ့ကျင့်
(၄) ဂျပန်နိုင်ငံမှ တရားဝင် အလုပ်ဗီဇာရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(၅) သင်တန်းတက်ရောက်စဉ် ကာလအတွင်း အဆောင်စီစဉ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
နေ့ရက် – ၂၄ – ၆ – ၂ဝ၁၅ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
အချိန် – နံနက် (၉)နာရီ မှ မွန်းတည့် (၁၂) နာရီ အထိ
နေရာ – ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ (၁၂)လွှာ၊ အမှတ်(၆ဝ/ဂျီ-၁)၊ ပါရမီလမ်းသစ်၊
ချော်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
တယ်လီဖုန်း – ဝ၁- ၈၅၅ဝ၆ဝ၈ သို့ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့အထိ (၂၃.၆.၂ဝ၁၅) ရက်နေ့ ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
လူတွေ့အောင်မြင်ပြီး သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် ရသူများသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ Emerald Education Excellence Center ၊ “မြ” ပညာ့ရိပ်မွန် အသက်မွေးမှု လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးကျောင်း၊ အမှတ် (၆၂၊ က)၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ သစ်စက်မှတ်တိုင်၊ သင်္ဃကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ (သွားဆေးတက္ကသိုလ်အနီး) တွင် သင်တန်း တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Business Performance Improvement Methodology.
Dr.Zin Wai Maw
Invest All Movers and Shakers !!!!!!!!
– Operational Managers
– Change Initiators
No.40(5-A),Mya Sabei Yeik Mon Street,
(၁) ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သူနာပြု တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိုပါသလား?
American Nursing Institute (ANI) အသိအမှတ်ပြု Certificate ရရှိမည် ဖြစ်သော Global Health Service Network (GHSN) မှ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် လာရောက် သင်ကြားပေးမည့် Nursing Skill Enhancement Course ( ၃ လ ) သင်တန်းကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး အဖြစ် Golden Zaneka Emerald Education Center မှ (၂၀၁၅) ခု August တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
သူနာပြုသိပ္ပံဘွဲ့ / သူနာပြုသားဖွား ဒီပလိုမာ အောင်မြင်ပြီးသူ Nurses များ တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးနောက် အောက်ဖော်ပြပါ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
GHSN နှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ထားသော ပြည်ပနိုင်ငံများဖြစ်သည့် UAE နိုင်ငံ Abu Dhabi ရှိ ဆေးရုံများနှင့် အခြားသော ဗီယက်နမ်၊ ဂူအမ် အစရှိသော နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင် အလုပ်ရရှိရနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး အလုပ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲများ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
မြန်မာနိုင်ငံ Private Hospital များရှိ International Clinics များတွင်လည်းကောင်း၊ International School များတွင် လည်းကောင်း၊ NGO နှင့် INGO အဖွဲ့အစည်းများတွင် လည်းကောင်း ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှု၊ ထိုက်သင့်တဲ့ လုံ့လဝီရိယ၊ ရဲရင့်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ရွှေရောင်အနာဂတ်များကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ GHSN မှ တိုက်ရိုက်သင်ကြားမည့် Nursing Skill Enhancement Course ကို တက်ရောက်ဖို့
အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းမှ စိတ်ချရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ Golden Zaneka Co Ltd. (မြစံပယ်) ၀၁ ၆၆၇၁၇၃
၂။ Golden Zaneka Co Ltd. (Emerald Education Center) အမှတ် ၆၂ (က)၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ သွား/ဆေးတက္ကသိုလ် အနီး၊ သစ်စက်မှတ်တိုင်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ဖုန်း- ၀၁၈၅၅၀၆၀၈
(၂) မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများအတွက် နည်းပညာသစ် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်
Clinical Engineer တယောက်ဖြစ်လိုပါသလား?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော Clinical Engineering Training သင်တန်းကို ဂျပန်နိုင်ငံ Osaka Jikei College နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ GZP Emerald Education Center တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၅ ဇွန်လတွင် စတင် ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းသား – BE ၊ B.Tech (မည်သည့် အထူးပြုဘာသာမဆို) ဘွဲ့ရပြီးသူ များ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းကာလ – ( ၁ ) နှစ် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ GZP Emerald Education Center တွင် (၉) လ တက်ရောက်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ Osaka Jikei College တွင် (၃) လ သွားရောက် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Certification – သင်တန်းပြီးမြောက်ပါက ဂျပန်နိုင်ငံ Osaka Jikei College မှ တိုက်ရိုက် ပေးအပ်သော Postgraduate Diploma in Clinical Engineering ကို ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး
– နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ နှင့်် Medical Equipment Company များတွင် Clinical Engineer တယောက်အဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သလို
– ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Osaka Jikei College တွင် National Qualification of Clinical Engineer Post Graduate ( ၁ ) နှစ် သင်တန်းကို ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် Clinical Engineer အဖြစ် နေထိုင် လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Scholarship – သင်တန်းတက်ရောက်မည့်သူများမှ သင်တန်းသား (၂) ဦး သို့မဟုတ် (၃) ဦး အတွက် ဂျပန်သို့ သွားရောက်နေထိုင်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို Osaka JikeiCollege, Japan မှ ကုန်ကျခံပေးမည် ဖစ်ဖစ်ပါသည်။ဂျပန်တွင်သုံးလနေထိုင်သင်ကြားစရိတ်၊အသွားအပြန်လေယာဉ်စရိတ်၊ဂျပန်စာသင်ကြားမှုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအပါအ၀င် စုစုပေါင်း သိန်း (၁၂၀)ကျပ် ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
၁။ မြ ပညာ့ရိပ်မွန် အသက်မွေးမှုလေ့ကျင့်သင်တန်းကျောင်း
Golden Zaneka Co Ltd. (Emerald Education Center) အမှတ် ၆၂ (က)၊ သံသုမာလမ်းမကြီး၊ သွား/ဆေးတက္ကသိုလ် အနီး၊ သစ်စက်မှတ်တိုင်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ဖုန်း- ၀၁၈၅၅၀၆၀၈
(၃) ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် သွားရောက်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း
သြစတေးလျားနိုင်ငံ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာ (Aging Home/ Senior Citizens Center) များတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူ ကျား/မ မရွေး လျှောက်ထားနိုင်ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) မရှိသေးသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံး ပညာအရည်အချင်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအဆင့် ရှိရပါမည်။
အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့်ပြီး ဖြစ်ရမည်။
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး သွက်လက်ချက်ချာသူဖြစ်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။
ဖော်ပြပါ အချက်များနှင့် ပြည့်စုံသူ လျှောက်ထားသူများအား GZP Emerald Education Center ၏ တာဝန်ရှိသူများမှ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း အောင်မြင်သူများသည် စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ CSM Academy International မှ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားဆရာများ ကိုယ်တိုင်လာရောက် သင်ကြားပေးမည့် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်း (Internship Training for Care Giver of Old Ailed Person) ကို ( ၆ )လ တက်ရောက် သင်ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (၆)လတွင် သူနာပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များနှင့်အတူ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ်ကို အတူသင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်း (၆)လ အတွက် သင်တန်းကြေးကို သင်တန်းသားမှ လစဉ်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် တပြိုင်နက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ CSM Academy International မှ တာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက် စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှု အောင်မြင်ပြီး ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများသည် သြစတေးလျား၊ နယူးဇီလန်နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံများရှိ ဘိုးဘွားပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး စင်တာများတွင် သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာ ဖွင့်လှစ်မှာ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းမှ စိတ်ချရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၄) သူနာပြုအကူ Certified Nurse-Aide (CNA) တယောက်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုလိုပါသလား?
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုပါသလား?
Emerald Education Excellence Training Center မှ ဖွင့်လှစ်သောသူနာပြုအကူ (Certified Nurse Aide) သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းဖြင့် သင့်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ခိုင်မာသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ သူနာပြုအကူသင်ရိုးညွှန်းတမ်း
ရှင်းလင်းသော စာတွေ့သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ ပြည့်ဝသော ဆရာဝန်ကြီး/သူနာပြုဆရာမကြီးများ
သူနာပြုစုခြင်း၊ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်မှုလက်တွေ့ လေ့လာမှု ပါရမီအထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်
သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာလက်တွေ့ လေ့လာမှုနှင်းဆီကုန်း နှင့် ဆည်းဆာရိပ် ဘိုးဘွားရိပ်သာများ
သင်တန်းပြီးဆုံးပါက တစ်ဦးချင်းစီ၏ အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍
ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် သူနာပြုအကူ တစ်ဦးအနေနှင့် လည်းကောင်း၊
အိမ်တိုင်ယာရောက် သူနာပြုစုခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများကို မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးတွင် သူနာပြုအကူအဖြစ် လျှောက်ထားလိုပါကGZP Emerald Education Excellence Training Center မှ အောင်လက်မှတ်ရရှိထားသောသူနာပြုအကူများကိုသာဦးစားပေးရွေးချယ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် လက်မလွှတ်သင့်သောအခွင့်အရေးကောင်းတရပ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်များ –
(နယ်မှ လာသူများအတွက် အဆောင် စီစဉ်ပေးပါမည်)
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊မေလ (၆) ရက်နေ့တွင် တန်းခွဲသစ် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် လစဉ် လဆန်းရက်များတွင် တန်းခွဲသစ်များရှိသဖြင့် တန်းခွဲသစ်အတွက် ယခု စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
GZP Emerald Education Excellence Training Center
(မြ ပညာ့ရိပ်မွန် ၊အသက်မွေးမှု လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးကျောင်း)
အမှတ် ၆၂/(က) ၊သံသုမာလမ်းမကြီး ၊သွား/ဆေးတက္ကသိုလ် အနီး ၊သစ်စက်မှတ်တိုင်၊သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဖုန်း -၀၁-၈၅၅၀၆၀၈။
(၅) စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် သွားရောက်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း
စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ Aging Home များမှ ဒါရိုက်တာများကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို ပါရမီ အထွေအထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး (၁၂)လွှာ ၊အမှတ်(၆၀) ၊G-1၊ချော်တွင်းကုန်း မီးပွိုင့်အနီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့တွင် မေလ(၃)ရက် ၊နံနက် (၉)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီအထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း အောင်မြင်သူများသည် စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ CSM Academy International မှ စကာင်္ပူနိုင်ငံသား ဆရာများကိုယ်တိုင် လာရောက်သင်ကြားပေမည့် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်း (Internship Training for Care Giver of Old Ailed Person) ကို (၄)လ တက်ရောက်သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး စင်တာများတွင် သေချာပေါက် အလုပ်အကိုင်ရရှိ လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အင်တာဗျူးကြေးမရှိ အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
အမည်စာရင်းကို လူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဖြစ်စေ အမြန်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းမှ စိတ်ချရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ် ၆၂/(က) ၊သံသုမာလမ်းမကြီး ၊သွား/ဆေးတက္ကသိုလ် အနီး ၊သစ်စက်မှတ်တိုင်၊သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဖုန်း -၀၁-၈၅၅၀၆၀၈။